सेमील्ट: वेब स्क्रैपर क्रोम एक्सटेन्सनको साथ गतिशील वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्दै
वेब स्क्रैर साइटहरु र वेब पृष्ठहरु को डेटा निकालन को लागी निर्मित Google Chrome ब्राउजर प्लगइन हो।. क्रोम एक्स्टेन्सन वेब स्क्रैपर प्रयोग गर्दै, तपाइँ वेब पेज वा वेबसाईटलाई पुनःप्राप्त गर्ने बारे एक साइटमैम सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।. तपाईंको साइटमैपको साथमा, वेब स्क्रैरले वेब पृष्ठलाई नेविगेट गर्छ र निर्देशित रूपमा सबै सम्बन्धित डेटा स्क्रैप गर्दछ - umzug student tipps cuny.
वेब स्क्रैपर को लाभ क्रोम प्लगइन
Chrome क्रोम एक्सटेन्सन को उपयोग गरेर प्राप्त डेटा वेब स्क्रैपर को अल्पविराम विभाजित मानहरु (CSV) फाइल को रूप मा निर्यात गरिन्छ।. वेब स्क्रैपर एक स्क्रैप प्लगइन बिन्दु-क्लिक-क्लिक गर्नुहोस् जुन कसैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ. यसरी तपाईं आफ्नो पैसा र समय दुवै बचत गर्न सक्नुहुन्छ र एकै समयमा समयमा वेबमा बहुमूल्य जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
वेब उपयोगी र बहुमूल्य डेटा भन्दा भरिएको छ. यद्यपि, प्रयोगयोग्य र पढ्न योग्य ढाँचामा डेटा प्राप्त गर्न सजिलो छैन. यसकारण तपाईंलाई क्रोम एक्सटेन्सन वेब स्क्रैफर चाहिन्छ. सार्वजनिक रेकर्ड, डाइरेक्टरी, प्रतिस्पर्धी सूची, र प्रयोगकर्ता समीक्षाहरू बहुमूल्य डेटामा बदल्न सकिन्छ. वेब स्क्रैपर संग, यो सबै डेटा स्क्रैप गर्न सकिन्छ र सजिलो रूपमा बचत गर्न सकिन्छ.
अज्ञात त्रुटि: सिन्टैक्स त्रुटि
एक बटनमा प्रभाव कमी क्लिक गर्नुहोस्
प्लगइन विच्छेदन छवि
समस्या को सामना गर्न को लागी एक पृष्ठ
एक पपअप लिंक को लागि अधूरा यूआरएल
वेब स्क्रैप: द समस्या Solver
वेब स्क्रैपर उच्च गुणस्तर र सजिलो प्रयोग स्क्रैपिंग सफ्टवेयर हो. वेब पृष्ठहरु र वेबसाइटहरु बाट डेटा निकाल्न को लागी, तपाईं को लागी लक्षित पाठ को चयन गर्नु पर्छ जबकि वेब स्क्रैर बाकी काम गर्दछ. चूंकि क्लाउडमा वेब स्क्रैपर स्वत: स्वचालित छ, तपाईंलाई स्क्रैपिंग त्रुटि वा अन्य समस्याहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन.
वेब स्क्रैपर संग, तपाईलाई आवश्यक परिणामहरू चाँडै सीएसवी फाइलमा घुमाईन्छ. यदि तपाईं सोच डीबी वा क्रोमको स्थानीय भण्डारणमा डेटा भण्डारण गर्न चाहनुहुन्छ भने. तपाईं प्रोग्रामर हुनुहुन्न किनभने दण्डको आवश्यकता छैन. यदि तपाइँ Google क्रोम ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाइँ क्रोम एक्सटेन्सन वेब स्क्रैपर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
यदि तपाइँको अर्को समाधान तपाईं सबै दिनको लागि डेटा स्क्रैप गर्न इन्टर्न को सेना भाडामा लिनुभयो भने, एक लागत प्रभावी समाधान तपाइँको ढोकामा ठिक छ. वेब स्क्रैपर संग, तपाईं आफ्नो डेटा को लागि बैकअप समाधान को विकास गर्न प्रोग्रामर को आवश्यकता छैन. सबै डेटा निष्कर्षण प्रक्रिया तपाईंको लागि गरिनेछ. Google क्रोम वेब भण्डारको लागि वेब स्क्रैपर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्.
वेब स्क्रैप प्लगइन विशेषताहरु
वेब स्क्रैपर इनबल्ट तत्वहरू छन् जुन तपाईंको स्क्रैपिंग प्रोजेक्टको प्रक्रियामा योगदान गर्दछ।. यहाँ कुञ्जी विशेषताहरू छन् जुन तपाई बारे जान्नुपर्दछ:
क्रोम ब्राउजरको साथ मिल्दो
वेब स्क्रैपर एक क्रोम प्लगइन हो जुन साइटमैप अनुसार डेटा निकाल्छ।. यो एक्सटेन्सनको साथ, तपाइँ एकल वा धेरै मूल्याङ्कनहरू चलाउन वा सेट शेड्यूल मार्फत डाटाको ठूलो सेटहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ.
को रूपमा निकाले डाटा निर्यात गर्दै यो क्रोमको प्लगइन निर्यातमा अल्पविराम विभाजित मानहरूको रूपमा स्क्रैप गरिएको डेटा. तथापि, तपाईं निकासी डेटा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सोचडीबी वा क्रोमको स्थानीय भण्डारण.
गतिशील साइटहरु र पृष्ठहरु लाई स्क्रैपिंग डेटा
वेब मूल्यवान डेटा संग पैक गरिएको छ।. यद्यपि, गतिशील साइटहरू र AJAX र जाभास्क्रिप्टसँग लोड हुँदै पृष्ठहरू स्क्रैप गर्दै सरल छैन. क्रोम एक्सटेन्सन वेब स्क्रैपरको साथ, गतिशील वेब पृष्ठबाट डेटा निकाल्दा तपाईंलाई समस्यामा पर्दैन.
वेब स्क्रैपर प्लगइन प्रयोग गर्दै, तपाइँ वेब साइटमा लक्षित-पाठ पहिचान गर्न एक साइटमैप बनाउनुहुन्छ।. तपाईंको Google क्रोम ब्राउजरमा वेब स्क्रैपर स्थापना गरेर अर्को स्तरमा तपाइँको स्क्रैपिङ अनुभव लिनुहोस्!